को सही सम्पत्ति को ओपरेटिव व्यवस्थापन एक सिद्धान्त रूपमा सैद्धान्तिक र forties र बीसौँ शताब्दीको अर्द्धशतकको ढाकिएको थियो। यो सिद्धान्त विकास विशिष्ट नियामक संरचना लागि खोज को परिणाम हो। यो राज्य मालिक रहने थियो, जबकि, थप प्रभावकारी राज्य सम्पत्ति प्रयोग अनुमति हुनेछ।
परिचालन व्यवस्थापन सही - यो राज्य सार्वजनिक संस्थाहरू र उद्यम गर्न तोकिएको छ कि एक सही छ। को वस्तुहरु मात्र होइन सम्पत्ति, तर पनि जो व्यापार को सामान्य पाठ्यक्रम मा विषयहरू छन् अन्य कुराहरू, हुन सक्छ। मात्र अपवाद भूमि हो।
परिचालन व्यवस्थापन र budgetary संस्थाहरू र उद्यमको स्वायत्त सही मात्र राज्य र स्थानीय सरकार संस्थाहरू लागू हुन्छ। एकै समयमा, यो स्थानान्तरण मामला र निजी सुविधाहरु legislated। यस मामला मा हामी निजी संस्थाहरू गठन बारे कुरा गर्दै छन्। ओपरेटिव व्यवस्थापनको सही पनि उत्पादन, फलफूल र आय निश्चित उद्यम वा संस्थाले वस्तुहरु को प्रयोगबाट गर्न को विस्तार। आफ्नो संरचना मालिक को स्थापना आदेश अनुसार निर्धारण गरिन्छ, र मूल्य अनुसार को व्यवस्था संग मा गणना गरिएको छ कुनै वस्तुको मूल्य गतिविधिहरु।
परिचालन व्यवस्थापन सही संघीय व्यवस्था आधारमा स्थापित छ। मालिक र कानुनी निकाय बीच सम्झौता कानून द्वारा निश्चित क्रममा परिवर्तन गर्न एक कारण छैन।
परिचालन व्यवस्थापन सही क्रम, प्रयोग र सम्पत्तिको अन्तर्गत शक्तिहरु समावेश छ। लक्षित क्षमता नागरिक कोड को मान्यता को सामग्री उद्यम मा, सीमित छ कि संघीय नियमहरु व्यवस्थाको तथ्यलाई मा व्यक्त गरिएको छ। साथै, सीमित र उद्देश्य हो, संस्थाहरू र गन्तव्य वस्तुहरु र सेट मालिकको जो गतिविधिहरु अनुसार।
व्यवस्था विषयको बजेट र निजी संस्थाहरू, सार्वजनिक उद्यम र स्वायत्त संस्थाका को व्यवस्थापन आवंटित गर्ने अधिकार आधारमा।
राज्य उद्यम मालिक को सहमति बिना तेस्रो दल एक व्यावसायिक आधारमा तिनीहरूलाई प्रदान गरेर मात्र उत्पादन, सेवा र काम प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। आनन्द उठाउन मात्र मालिक को सहमति पछि र कम्पनी यसको वैधानिक गतिविधिहरु आयोजित जो अन्तर्गत सीमा भित्र गर्न सक्ने क्रियाकलापहरू आय सहित अन्य सबै सम्पत्ति।
निजी र लागि budgetary संस्थाहरू परिचालन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार निपटान को शक्तिहरु प्रदान गर्दैन। स्वायत्त संस्थाहरू मात्र को खुलेर निपटान गर्न अनुमति , चल्ने सम्पत्ति आफ्नै गतिविधिहरु देखि एक "विशेष मूल्यवान" को स्थिति र मुनाफा भएको छैन। को विशेष मूल्य यस्तो वस्तुहरु, वैधानिक गतिविधिहरु को कार्यान्वयन एकदम जो बिना गाह्रो भनिन्छ। वास्तवमा सम्पत्ति भने क्रममा आरएफ सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था लागि सम्पत्ति सुरक्षित प्रक्रिया मा संस्थापक द्वारा निर्धारित श्रेणी स्वामित्वको।
रूसी संघ को बाहिर छन् भनेर वस्तुहरु केहि प्रकारको (बाहिर साझेदारी, जमानत, एकाइ साझेदारी, अचल सम्पत्ति) को सम्बन्ध मा अख्तियार सरकार द्वारा सेट छन्।
परिचालन व्यवस्थापन सही को उद्भव सम्पत्ति को स्थानान्तरण coincides। वस्तुहरु को स्थानान्तरण लागि आधार एक पक्षीय सम्झौता, मालिक गरेको छ जो हुन मानिन्छ। अधिकार को उद्भव, साथै यसको समापन, प्रासंगिक शरीर द्वारा दर्ता गरिएको छ।
अख्तियार अवस्थित कानून को सामान्य आधार अनुसार बर्खास्त।
अभिभावकको जिम्मेवारी को अनुचित पूरा, मनोवैज्ञानिक वा शारीरिक दुरुपयोग, रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था र लागु पदार्थको लत: पिता को अभिभावकको अधिकार समापन लागि आधार
अवधारणा, तत्व र सुविधाहरू एक अपराध को। को ठेस को विशेषता तत्व
गोप्य रेकर्ड व्यवस्थापन: संगठन र व्यवस्थापन नियम
जोडी र भित्ता भस्म भत्किएको
आइसक्रिम "बाउन्सी गाई": संरचना, ताप र निर्माता
Neyromultivit, प्रयोगको लागि निर्देशन
"MAK" कस्मेटिक्स। सजावटी प्रसाधन म्याक: ग्राहक समीक्षा
कसरी कागज को चुच्चो बनाउन: विस्तृत निर्देशनहरू
के खरिद व्यवहार असर?
दूध संग चरण नुस्खा जौ porridge द्वारा चरण
सपना व्याख्या: कोर्नु। यो कस्तो सपना सक्नुहुन्छ?
अन्डा कसरी खाना पकाउनु
ब्राजिलका प्रमुख नदीहरू र पोखरीहरू: सूची, फोटो
Pastille "Sharmel": संरचना र उत्पादन को उपयोगी गुणहरू। Pastille "Sharmel": क्यालोरी